8 sababo caafimaad u cun shukulaatada madow
Home Aragti-doon 8 sababo caafimaad u cun shukulaatada madow
Waa cunto caafimaad ah oo u wanaagsan maskaxda iyo jirka
Waa macaan, waana caafimaad. iStock
In aad maalintii cunto xabad shukulaatada madow ah, waxay u wanaagsan tahay caafimaadka wadnaha iyo xoojinta maskaxda. Waxay joojineysaa walwalka, waxayna yareyneysaa halista sokorta.
Haddii aad jeceshahay in aad cunto shukulaatada, hadda waxaad haysaa sababtii aad u cuni lahayd – ama 8 arrimood.
Cilmi-baarisyo caafimaad oo lagu sameeyay shukulaatada madow, waxaa lagu ogaaday in ay ku badan yihiin maadooyiinka wasakhda ka saara jirka, waana cunto cajiib ah.
Balse ogow, xisaabta kuma jiraan shukulaatooyiinka ka sameysan caanaha ama kuwa cad. Kuwaas lama oga faa’iidadooda, balse sokorta ayaa ku badan.
Sida ugu wanaagsan waa in aad xulato kuwa ka sameysan miraha Cacao illaa boqolkiiba 70 iyo in ka badan, Sida laga soo xigtay Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Harvard.
Haddaba, adigoo aan iska badineynin in maalintii aad cunto hal xabo oo shukulaatada madow ah, halkan ka akhriso waxa aad ka faa’ideyso.
1 – Waxay yareyn kartaa halista wadne-xanuunka iyo dhinac-qalalka (stroke)
Mid ka mid ah arrimaha ugu waawayn ee seynisyahannada ay baareen waa sida ay shukulaatada madow u caawineyso caafimaadka Wadnaha.
Fallanqeyn ballaaran oo lagu sameeyay baaritaannada kala duwan oo siddeed ah, waxaa lagu ogaaday in cunista shukulaatada ay la xiriirto in ay yaraato halista xanuunada wadnaha.
Baaritaan lagu daabacay wargeyska Journal Heart, sannadkii 2015-kii, waxaa lagu sheegay in dadka cuna shukulaatada madow, maalin kasta, in ay aad u yartahay halista ay ugu jiraan wadna-xanuun iyo Stroke, marka la barbardhigo kuwa kale.
2 – Xoojinta Fahamka, xusuusta iyo shucuurta qalbiga
Ma ahan mala-awaalkaaga – cilmi-baaris ayaa muujisay in cunista shukulaatada madow laga faa’ido in si wanaagsan aad diiradda wax u saarto iyo feejignaan wanaagsan, waana arrin faa’iido u ah maskaxda.
Joy DuBost, oo ku taqasustay nafaqada, waxay sheegtay in baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in Shukulaatada hagaajineyso shaqada neerfayaasha ee maskaxda, waxayna yareyneysaa walwalka iyo shucuurta kacsan sida xanaaqa iyo wixii la mid ah.
Cilmi baaris lagu daabacay Joornaalka Frontiers Nutrition, sannadkii 2017-kii, waxay muujisay in in degganaanta maskaxda iyo shukulaatada Madow uu xiriir ka dhexeeyo.
3 – Shukulaatada madow waxay u fiican tahay sokorta dhiigga iyo yareynta halista macaanka
In maalin kasta aad cunto shukulaato, waxaa suuragal ah in ay kuula muuqato inaysan suuragal ahayn in Sokorowga ay ka hortageyso, balse dhowr cilmi-baaris ayaa lagu caddeeyay in dhiigga jirka ay isu dheelitireyso.
Baaritaan, bishii October ee 2017-kii lagu daabacay Wargeys ka hadla arrimaha caafimaadka iyo dawada, waxaa lagu sheegay In maadama flavonoids ee ku jirta shukulaatada madow ay yareyneyso waxyaabaha ay seynisyahannada aaminsan yihiin in ay sababaan sare u kaca sokorta dhiigga.
Waxay shukulaatada jirka ka dhigeysaa in uu u adkeyso halista sokorta, ayna yaraaneyso halista uu qofka ku qaadi karo xanuunka macaanka.
4 – Shukulaatada waxay u fiican tahay caloosha iyo iscaateynta
In maalin kasta aad cuntoi shukulaato waa bilowga iscaateynta, balse baaritaan ayaa lagu ogaaday in shukulaatada madow ay xakameyso gaajada caloosha iyo heerka wax cunista qofka. Waana sida ay kaaga caawineyso is caateynta.
Dhakhtarka ku taqasusay Neerfayaasha, Will Clower, wuxuu qoray bug dhan oo ku saabsan cunidda shukulaatada iyo is caateynta, wuxuuna ku tilmaamay in ay wanaagsna tahay in la cuno raashiinka ka hora ma ka dib.
5 – Waxaa suuragal ah in ay qeyb ka noqoto ka hortagga kansarka
Waxaa jiro cadeymo muujinaya in shukulaatada madow ay ku jiraa waxyaabo ay suuragal tahay in ay ka hortagayaan noocyo ka mid ah kansarka iyo in ay koraan unugyada sababa xanuunkan dilaaga ah.
Warbixin la daabacay 2015-kii, oo lagu qoray Joornaalka Caafimaadka iyo Kiimikada ee Hindiya, waxaa lagu xusay in maadooyiinka la dagaallama wasakhda ee Shukulaatada ay yareeyaan da’da iyo xanuunada unugyada sababa ee dhalin kara kansarka.
6 – Waxay u wanaagsan tahay maqaarka ama haragga jirka
Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Harvard, waxaa laga soo xigtay in fitamiinnada iyo macdanta ku jira shukulaatada madow, ay ka buuxaan maadooyiin badan oo u fiican maqaarka.
Maadada Manganese, eek u jirta shukulaatada, tusaale ahaan, waxay jirka ka caawineysaa in uu soo saaro collagen, oo ah nafaqo jirka ama maqaarka ka caawineysa in uu caafimaado, dhallinyarana aad u ekaato.
7 – Shukulaatada waxay sare u qaadi kartaa kolestoroolka wanaagsan, midkan xunna yareyso
Shukulaatada madow, waxaa la ogaaday in ay ka mid tahay cuntooyiinka isu dheellitira kolestoroolka jirka ku jira ee cuntada ka yimaada.
Lowska Almonds-ka, Shukulaatada madow, iyo cacoa-ha aan la macaaneynin, waxaa la ogaaday in ay kaalin wayn ka qaadanayaan yareynta dufanka sababa xanuuno badan ee jirka soo gala, sida lagu xusay baaritaan la sameeyay 2017-kii oo lagu daabacay Joornaalka Arrimaha Wadnaha ee Mareykanka.
8 – Shukulaatada madow waa nafaqo — waana macaan iyo dhadhan wanaagsan!
Dhammaan faa’idooyiinkaas waxaa u dheer, hal arrin oo la xaqiijiyay: Waa in shukulaatada madow ay leedahay nafaqooyiin. Dabcan, shukulaata kasta inta ay madowdahay ayey ka faa’iido badan tahay kuwa kale.
Shukulaatada madowgeeda uu yahay boqolkiiba 70, waxay ka fiican tahay kuwa kale, marka loo eego sida ay jirka wasakhda uga saareyso.
Waxaa ka buuxo maadooyiinka Fibre, potassium, calcium, copper, iyo magnesium, Sida lagu sheegay cilmi-baaris lagu daabacay Joornaalka Antioxidants & Redox Signaling.
Previous article10 wax oo dadka badankood ay ku qarwaan iyo micnahooda
Next article4 nooc oo gabdhaha ka mid ah oo nimanku aysan jecleyn